Fetiben’ny Zavakanto tsy eken’ny “toe-tsaina nasionaly” ao Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy
Fetiben'ny Zavakanto tsy eken'ny “toe-tsaina nasionaly” ao Azerbaijan
Niteraka lonilony tao Baku ny hosodoko an-drindrina ahitana transgenre izay
Voadika ny 04 Novambra 2019 10:10 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, فارسی, Español, Nederlands, Ελληνικά, English
Hoso-doko amin'ny rindrina iray any Baku izay manitsakitsaka ny “soatoavina sy toe-tsaina nasionaly” 2019. Saripikan'i Turxan Qarishga / Hamam Times. Nahazoana alàlana.
Fetin'ny zava-kanto ankehitriny fotsiny io.
Nanomboka ny 17 ka hatramin'ny 27 septambra, dia nasaina ireo mpankafy zava-kanto, sarimihetsika sy tononkalo mba handray anjara amin'ny “Maiden Tower. To Be a Woman,” fetibe nokarakarain'ny Delegasionan'ny Vondrona Eoropeanina tany Azerbaijan sy iraka ara-diplaomatika maromaro. Nankalaza ny faha-100 taonan'ny fanafahana ny vehivavy Azerbaijaney ny fetibe, nomena ny anaran'ilay marika malaza any Baku. Natomboka ary nasongadin'ilay mpanakanto Sabina Shikhlinskaya, izay namorona ny forum momba ny zavakanto ankehitriny izay manana anarana mitovy aminy tamin'ny taona 2009 ny hetsika.
Iray amin'ireo hetsiky ny fetibe ny fampiratiana hosodoko an-drindrina sy ny graffiti natao tany Kombinat, fanaovana atrikasa haolo tao an-drenivohitra Azerbaijani izay efa nampiasain'ny sendikan'ny mpanakanto indray mandeha nandritra ny vanim-potoana sovietika izany. Manantena ny mpikarakara fa hijanona eo ireo sangan'asa aorian'ny fety.
Saingy nisy zavatra hafa kely nitranga. Nahasarika ny maro ny hosodoko iray nataon'ilay mpahaikanto Soedoà Carolina Falkholt, mampiseho vatan'ny olona iray nanova taovam-pananahana (transgenre), satria nolokoina tamin'ny fomba tsy artistika loatra izany raha vantany vao tapitra ny fetibe.
Raha ny tena izy dia niteraka resabe, resadresaka momba ny fahitana imasom-bahoaka ny firaisana ara-nofo izany, ary nisy mihitsy aza ny fanehoan-kevitry ny governemanta ho fiarovana ny “toe-tsaina nentin-drazana”.
Hosodoko Transgender ao Baku. Transgender mural in Baku #lgbtq ~ curated by @maiden_tower_tbw
Zava-kanto ankehitriny ao Baku: Taloha/Taoriana
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny 1news.az, sampam-baovao miaraka amin'ny governemanta eo an-toerana, nilaza i Shikhlinskaya fa niady mafy izy mba hitahiry ilay hosodoko, saingy tsy nahomby. “Manoloana tranobe iray ny rindrina nandokon'ilay mpanakanto ny hosodokony, ka nitaraina tany amin'ny polisy ireo mponina tao. Taorian'ireo fitarainana maro nataon'ny olona gaga tamin'ilay sary, dia tapaka ny hevitra fa lokoina ny ampahany amin'ny sangan'asan'i Falkholt,” hoy ny fanazavan'i Shikhlinskaya, ary nampiany. fa, satria sangan'asa aseho ho an'ny besinimaro io, dia tsy azo atao tsinontsinona ny hevitry ny mponina.
Mazava be tahaka ilay nasongadina tao Baku ny sangan'asa hafa ataon'i Falkholt. Mpanakanto Soedoà mihaika ireo hevi-draikitra ara-pananahana sy ny fanehoana ny vatan'ny vehivavy izy. Ao Azerbaijan manana toe-tsaina nentin-drazana, izay mbola ao anatin'ny fahazazana ny zon'ny vehivavy, tsy azo ekena izany:
Liana te-ahafantatra aho, nahoana no tsy misy olona nandrava ny sarivongan'ny vehivavy noafahana?
Ry namana, tsy tonga vetivety amin'izany ianao. Tokony natombok'izy ireo tamin'ny graffiti kely aloha.
Mamindrà fo, ataovy izay tianao ao amin'ny Torgovaya [làlana lehibe ho an'ny mpandeha an-tongotra any Baku] saingy ahoana no ahafahanao manao sarina vihy eo amin'ny fiolanan-dalana ao amin'ny distrika kely faha-3 (anaran'ilay faritra nisian'ny fampirantiana]
Voalohany, nolokoina ny nono teo amin'ilay hosodoko, ary nosaronana tsikelikely ny ampahany hafa “manafintohina”. Mampiseho ireo sary tamin'ilay faritra tao amin'ny haino aman-jery sosialy fa voarakotra tanteraka ilay hosodoko tamin'ny alatsinainy ny 28 septambra, izay azo antoka fa ny manampahefana eo an-toerana no nanao azy.
Namoaka fanambarana ny biraon'ny ben'ny tanànan'i Baku tamin'ny 29 septambra, mitaraina momba ny ezaka an-terisetra handoko ny hosodoko, saingy nanaiky fa nahatafintohina ny mponina sy ny “toetsaim-pirenena” Azerbaijan izany.
Na dia firenena maro kolontsaina aza i Azerbaijan, dia manana ny soatoaviny sy ny toe-tsaina nasionaliny manokana izy. Tsy tokony hohadinoin'ny mpitsidika fa firenena Silamo i Azerbaijan. Satria mandefitra amin'ny fivavahana sy soatoavina hafa izahay, dia manantena izahay fa tahaka izany koa ireo mpitsidika. Raisina amim-panajana lehibe ireo vahininay. Saingy arovana ny tranobe eto an-drenivohitra, nohavaozina ny endriny. Voaràra ny manao sary eny amin'ny trano any Baku. Tsy midika akory ny fahazoana manao sary amin'ny tranobe mandritra ny fety fa azo atao ny maneho ny soatoavin'izy ireo izay manohitra ny fitondran-tenantsika amin'ny alàlan'ny sangan'asany ry zareo. Toy ny hoe tokony avela hitory ny fivavahany manokana ireo mpitsidika tonga any Azerbaijan. Tsy izany no fomba mety. Tsy mitovy hevitra mihitsy amin'ny [hevitra izahay fa] fa mariky ny tsy fanajana ny zava-kanto sy ny mpanakanto ny fanapahan-kevitra handoko ny sangan'asa. Misy ireo trano any Baku izay misy karazana graffiti saingy ny mpanakantontsika no nanao azy io tamin'ny fomba matihanina ka mankafy azy ireo isika sy ny vahinintsika.
Ity firesahana momba ny “soatoavina sy fenitra nasionaly” ao Azerbaijan ity dia manome fomba fijery lehibe momba ny fomba fahitan'ny fiarahamonina Azerbaijaney ny miralenta, ny zon'ny LGBTQ +, na raha ny marina izay lohahevitra rehetra matetika takonan'ireo fitsipika ireo. Saingy manakatona ny saina tsy hitodika amin'ny fahasamihafan'ny fanehoana ara-javakanto ny miafina ao ambadiky ny voalin'ny fitondran-tena sy ny “soatoavina nasionaly”, ny manamafy fotsiny ihany ny harena ara-kolontsain'ny firenena.